Surely Nzvimbo Ye Art - Dhizaini magazini
Nzvimbo Ye Art
Nzvimbo Ye Art Uhu hunyanzvi, hwakasarudzika uye hwekutengesa zvese zvinosangana pamwechete munzvimbo imwechete. Kubva zvakavakirwa iyo iri nyika-inoshanda chipfeko hovhiri sideline fekitori. Imba yose inochengeterwa mottled magadzirirwo emadziro, seyakagadziriswa mameseji yenzvimbo, gadzira zvakasiyana zvakasiyana neyekunze, zvakare inogadzira chiitiko nzvimbo. Abandon yakanyanyisa kushongedza, yakashandisa imwe yakapfava kushongedzwa kwekuratidzira iyo yakagadzira zororo rekunzwa. Musiyano uripo pakati peakasikwa neyekutanga nhanho inoshanduka-shanduka pakutsigiridza kwakasimba kwenzvimbo mune ramangwana.
Zita rechirongwa : Surely, Vagadziri zita : Michael Lam, Izita remutengi : Surely.
Nzvimbo Ye Art Michael Lam Surely